Home About Us Course Outline Financial Assistance Activities Our Students Contact Us
Glory Career Training Centre ကို ၂၀၀၄ သြဂုတ်လမှာ စတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်စဉ် က အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာ (၆) မျိုးဖြင့်သာ စတင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် City & Guilds of London Institute (UK) နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး Diploma in Electrical Installation နှင့် Diploma in Refrigeration & Air Conditioning သင်တန်း (၂) မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံး စတင်ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းကျောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သင်တန်းများကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာခဲ့ရာ ယခုအခါ အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာသင်တန်း (၁၆)မျိုး၊ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း အတတ်ပညာ (၁၅)မျိုးနှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (၁၅)မျိုး၊ စုစုပေါင်း သင်တန်းအမျိုး အစားပေါင်း (၄၆) မျိုးခန့်အထိ ဖွင့်လှစ်လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သင်တန်းအမျိုးပေါင်း(၄၆) မျိုးခန့်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖွင့်လှစ်နိုင်စေရန်၊ အချိန်ပိုင်း၊ အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းပေါင်း (၃၀)ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ သင်တန်းသားပေါင်း (၂၀,၀၀၀)ကျော်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဂလိုရီသည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အိုကာယာမာနည်းပညာသိပံ ကျောင်းနှင့်ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသော မော်တော်ကားနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
GLORY Career Training Centre was first established in August, 2004. We started with six professional / vocational courses. However, in June 2005, we became the first training centre to conduct two diploma course- Diploma in Electrical Installation and Diploma in Refrigeration & Air Conditioning through affiliation with City & Guilds of London Institute (UK). By gradual extension, we are now offering (46) different courses –(16) diploma course on engineering ; (15) professional / vocational courses; and (15) courses on Computer and English combined. We have employed over (30) partimers and fulltimers to enable the courses to achieve success. As of December 2016, more than 20,000 have been trained.
In 2014 ,by co-operation of Glory and OIST ( Okayama Institute of Science and Technology ) , Japan , Glory has become the first "Automotive Training School in Myanmar"
GLORY တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ -
''လူငယ်များအား ခိုင်မာသောအနာဂတ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက် ဘ၀အာမခံချက်ရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာများ၊ အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုကောင်းသော၊ အများအားကိုး ယုံကြည်ထိုက်သော အတတ်ပညာ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်'' တို့ဖြစ်သည်။
One mission of GLORY is “ To impart professional / vocational disciplines and engineering subjects to youth in order that they can procureasecure that will guarantee their livelihood as well as to turn the training centre into one worthy of trust and rending the most excellent service.”
GLORY သင်တန်းသားများအတွက် စာသင်ခန်းအတွင်းသင်ခန်းစာများအပြင် လုပ်ငန်းခွင် ဗဟုသုတများ ရရှိ စေရန်၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် ပတ်သက်သော ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စက်ရုံများနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါသည်။
GlORY hasastrong network of engineering firms, organization and factories for conducting of extracurricular activities.
GLORY မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုများမှာ (၁)အင်ဂျင်နီယာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာများ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတို့ကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးခြင်း။
(၂)ကုမ္ပဏီိနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတိုင်း အဖွဲ့လိုက်လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်း။
(၃)လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အေဂျင်စီများ၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်းအလုပ် သမားတွင်အရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်း ရှိ/မရှိကို စစ်ဆေးပေးခြင်း။
(၄) အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စာပေများရေးသားထုတ်ဝေခြင်း။
(၅) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက် Project အချို့ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
GLORY is providing the following service;
(1) Conducting training courses on engineering, professional / vocational education, computer and English Language;
(2) Offering tailor-made training packages to companies and organization;
(3) Conducting qualifying examinations as required by the employers and employment agencies;
(4) Publishing of technical literature; and
(5) Offering to implement the projects of external organizations and companies.
၂၀၀၈ ဇွန်တွင်ကျင်းပသော City & Guilds (UK) စာမေးပွဲတွင် GLORY မှ သင်တန်းသား မောင်မင်းစိုက်ချမ်းမွန် သည် ကမ္ဘာ့အမှတ် အများဆုံး ရရှိပါသဖြင့် ရွှေတံဆိပ် (Medal of Excellence) ဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် GLORY သင်တန်းကျောင်းအားလည်း "High Standard of Teaching and Training School" အဖြစ် City & Guilds (UK) မှ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ချီးမြှင့် ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
Maung Min Site Chan Mon from our training centre scored the world’s highest marks in an City & Guilds (UK) examination held in June 2008.He was awarded the Medal of Excellence and what is more, the City & Guides(UK) recognized GLORY by granting the certificate “High Standard of Teaching and Training School. "
» Engineering Diploma Course
» Vocational Engieering Course
» Computer Skills Course
» English Proficiency Course
» Fees And Time Table
Mere six-month attendance at GLORY can win you the internationally recognized Electrical Installation Diploma presented by UK, GLORY is the first and only one training school in Myanmar that can issue Diploma in Electrical Installation.
Room No(3/4), Third Floor,Building A,Corner of Bo Myat Htun Road & Mahar Bandula Road, Botahtaung Tsp,Yangon.Myanmar
Phone : 09- 5197817, 09-73121717
2008 Dec Series
2012 Dec Series
Advanced Dip in Engineering(Mechanical)
Copy Right © 2009-2010 GLORY Career Training Centre . All Rights Reserved.